Mayelana ne-COD, izindaba ze-BOD-Industry-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Mayelana ne-COD, i-BOD
Isikhathi: 2020-06-29 Hits: 28
I-COD (Chemical O oxygen Demand): Ngaphansi kwezimo ezithile, inani le-oxidant elisetshenziswa ekwelapheni amasampula wamanzi nge-oxidant ethile eqinile.
I-COD ikhombisa izinga lokungcola emanzini. Lapho likhula kakhulu i-oksijini lamakhemikhali, kulimaza kakhulu ukungcoliswa kwezinto eziphilayo emanzini.
I-COD ikhonjiswe ku-mg / L, futhi ikhwalithi yamanzi ingahlukaniswa ngezigaba ezinhlanu:
I-COD yesigaba sokuqala nesigaba sesibili yi-≤15mg / L, engahlangabezana ngokuyisisekelo nenani lamanzi okuphuza, futhi amanzi anenani elikhulu kunelesi lesibili awakwazi ukusetshenziswa njengamanzi okuphuza.
Isigaba sesithathu se-COD ≤ 20mg / L, isigaba sesine se-COD ≤ 30mg / L, kanye nesigaba sesihlanu se-COD ≤ 40mg / L konke kuyikhwalithi yamanzi engcolisiwe. Ukuphakama kwenani le-COD, kulapho kungcolisa kakhulu ukungcoliswa.
I-BOD (I-Biochemical O oxygen Demand): Ngaphansi kwezimo ze-aerobic, ukuhlushwa komoya-moya okuqediwe okudingakalayo kwinqubo ye-biochemical yokubola kwento encane emanzini.
I-BOD iyinkomba yokuqapha imvelo esetshenziselwa ukuqaphela ukungcoliswa kwento yezinto eziphilayo emanzini. Izinto ze-organic zingadalulwa ngama-microorganisms. Kule nqubo, i-oksijini idinga ukusetshenziswa. Uma umoya-mpilo oncibilikisiwe emanzini awanele ukunikela ngezidingo zama-microorganisms, umzimba wamanzi usesimweni esingcolisiwe.
Buyini ubudlelwano phakathi kweCOD neBOD?
I-COD (Chemical O oxygen Demand) isamba se-oxygen edliwayo yi-oxidation yokukhuculwa kwendle ngamakhemikhali, futhi i-BOD (Biochemical O oxygen Demand) inani le-oxygen elichithwa yi-oxidation yama-microorganisms omkhuhlane wamanzi. Ukusetshenziswa kakhulu komoya-mpilo kusho ukungcola okuningi emanzini.
Ngokwesiko, i-COD (i-Chemical O oxygen Demand) imelela kahle yonke into esemanzini, futhi i-BOD (Biochemical O oxygen Demand) imelela izinto eziphilayo ezingagxeki emfucumfucwini. Ngakho-ke, umehluko phakathi kwe-COD ne-BOD ungamelela into ye-organic engakwazi ukufakwa emgodini wokukhucululwa kwendle.
Okwedlule: Ukungaqondi okuthile mayelana nenqubo ye-MBR
Okulandelayo: Obunye Ubuchwepheshe Bemithi Yokwelashwa Kwezilwane Ezivamile eTshayina